Hlola iJalimane - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseJalimane
Bukela ividiyo ekhuluma ngeJalimane
IGermany ngokusemthethweni: iRiphabhulikhi YaseJalimane; IsiJalimane: IBundesrepublik Deutschland izwe elikhulu kunawo wonke eCentral Europe. Ihlanganiswe ngasenyakatho yi Denmark, empumalanga nge Poland kanye neRiphabhulikhi yaseCzech, eningizimu yi-Austria neSwitzerland, nangasentshonalanga nge France, I-Luxembourg, iBelgium ne Netherlands. IJalimane yinhlangano yezizwe ze-16, ehambelana kakhulu nezifunda ezinamasiko abo ahlukile futhi ahlukile.
Hlola iJalimane njengenye yamazwe ase-Europe anethonya kakhulu ngokwesiko, nelinye lamandla amakhulu omnotho emhlabeni. Yaziwa emhlabeni wonke ngobunjiniyela bayo obunembile nemikhiqizo yobuchwepheshe obuphakeme, iyancomeka ngokulinganayo izivakashi ngobuhle bayo obudala bomhlaba kanye ne "Gemütlichkeit" (coziness). Uma unemibono yeJalimane njengeyodwa engenangqondo, izokumangaza ngezifunda zayo eziningi zomlando kanye nokwehlukahlukana kwasendaweni.
Izimpande zomlando namasiko waseJalimane aqala ezizweni zamaJalimane nangemva kwalokho kuMbuso Oyingcwele WaseRoma. Kusukela ngeminyaka yokuqala ephakathi, iJalimane yaqala ukuhlukana yaba ngamakhulu amazwe amancane. Kwakuyizimpi zikaNapoleon ezaqala inqubo yobumbano, eyaphela e-1871, lapho inani elikhulu lemibuso yaseJalimane eyayizimele ngaphambili lihlangene ngaphansi kobuholi bePrussia ukwakha uMbuso WaseJalimane (i-Deutsches Kaiserreich). Lokhu kuthunjwa kweJalimane kwafinyelela empumalanga kuyo yonke indlela eya osukwini lwanamuhla iKlaipeda (Memel) eLithuania futhi kwahlanganisa nezifunda ze-Alsace neLorraine osukwini lwanamuhla-France, okuyingxenye encane empumalanga yeBelgium (Eupen-Malmedy), indawo emngcele omncane e- eningizimu Denmark futhi ngaphezulu kwe-40% yePoland yanamuhla. Lo mbuso waphela e-1918 lapho uKaiser Wilhelm II aphoqeleka ukuba athunjwe ngesikhathi sokuhlulwa kweJalimane ngasekupheleni kweMpi Yezwe I (1914-1918) kwalandelwa yisikhathi esifushane nesingalunganga esibizwa ngeReimar Republic, esizamile ngeze ukusungula ngokuphelele isizwe esinenkululeko, esithuthukayo nenentando yeningi. Ngenxa yokuthi iRiphabhulikhi encane yahlushwa izinkinga ezinkulu zezomnotho ezivela empini, njengokuthi: isimo esibucayi se-1921-23, ukukhokha okubuyiselwe okweletwa ngenxa yokulahleka kwempi, kanye nehlazo lesiko lokuhlulwa okuyihlazo. eMpini Yezwe I, izishoshovu zezombusazwe ezivela ngakwesobunxele nakwesokudla zasebenzisa ithuba lezinkinga ezihlelekile zoMthethosisekelo weWeimar, okwaholela eQenjini lamaNazi eliholwa u-Adolf Hitler elawula amandla e-1933.
IJalimane iyindawo esebenza ngamandla kwezomnotho, eziqhenya ngomnotho omkhulu kunayo yonke eYurophu. Naphezu kwesibalo sazo esincane kakhulu ungowesibili othumela ngaphandle ngobukhulu emhlabeni.
Isikhungo sezimali saseJalimane nezwekazi laseYurophu Frankfurt am Main, futhi futhi kungabhekwa njengenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokuhamba kwezindiza eYurophu, ngesithwali sefulegi laseJalimane uLufthansa aziwa ngokungabi nje othwali, kodwa kunalokho abe ngumkhiqizo ohlonishwayo. IFrankfurt ifaka umugqa wesibhakabhaka ohlaba umxhwele izakhiwo eziningi eziphakeme, okungajwayelekile impela eCentral Europe; lesi simo siholele ekutheni idolobha libizwe ngokuthi “Manhattan”. Kubuye kube yikhaya le-European Central Bank (ECB), okuyenza ibe yisizinda se-Euro, imali esezingeni eliphezulu ezweni lonke esetshenziswa kuyo yonke i-European Union. Isikhumulo sezindiza iFrankfurt Rhein-Main International Airport yisikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke kuleli, kuyilapho iFrankfurt Stock Exchange (FSE) iyindawo ebaluleke kakhulu yokuhwebelana kwamasheya eJalimane.
Ukuba yiriphabhulikhi yenhlangano, iJalimane iyizwe elinabile kakhulu, elihlanganisa umehluko wesiko phakathi kwezifunda. Abanye abahambi mhlawumbe bacabanga ubhiya, lederhosen ne-Oktoberfest lapho kukhulunywa ngeJalimane, kepha isiko elidumile lase-Germany le-alpine nelithi likabhiya ligxile kakhulu eBavaria nase Munich. Lapha ubhiya ubhekelwa ngokwesiko kuma-mugs we-1 litre (imvamisa hhayi ezindaweni zokudla nezindawo zokudlela, noma kunjalo). I-Oktoberfest yaminyaka yonke ingumkhosi ovakashelwe kakhulu eYurophu kanye nobulungiswa obukhulu kunabo bonke emhlabeni. Izifunda zaseJalimane eziseningizimu-ntshonalanga, nokho, zaziwa kakhulu ngezindawo zazo ezikhulisa iwayini (isib. IRheinhessen nePalatinate) neBad Dürkheim ku- 'Germany Wine Route' (Deutsche Weinstraße) ehlela umkhosi omkhulu wewayini emhlabeni wonke onabavakashi abangaphezu kwama-600,000 minyaka yonke.
Izimoto ziwuphawu lokuziqhenya kwezwe lonke kanye nesimo senhlalo eJalimane, njengakwamanye amazwe amaningi. Ngokuqinisekile abakhiqizi abanjengo-Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche neVolkswagen badume umhlaba wonke ngekhwalithi yabo, ukuphepha, impumelelo kanye nesitayela. Leli khwalithi lifaniswe nenethiwekhi enhle kakhulu yemigwaqo yaseJalimane kubandakanya inethiwekhi eyaziwa ngokuthi i-Autobahn, enezingxenye eziningi ngaphandle kwemingcele yejubane eheha abashayeli abalambile abanejubane. Kukhona izivakashi ezisheshayo eza eJalimane ukuze nje ziqashe imoto yezemidlalo engaphandle futhi ziwugijime we-autobahn. Ngokumangazayo ngosayizi wayo, iJalimane iyikhaya lenethiwekhi yezithuthuthu ngobukhulu emhlabeni. IGermany futhi inetwork inethiwekhi ebanzi yezitimela ezihamba ngesivinini esikhulu - i-InterCityExpress (ICE).
AmaJalimane ajwayele ukuba nabantu abanobungane, yize i-stereotype yokuthi ingaqina futhi ibande kwesinye isikhathi iyiqiniso. Vele ube nenhlonipho futhi ulunge futhi uzolunga.
IJalimane iyiriphabhulikhi yenhlangano equkethe ama-16 uthi (abizwa nge- “Bundesländer” noma ancishiswe abe ngu “Länder” ngesiJalimane). Abathathu kwabakwaBundesländer empeleni bayiziindawo zamadolobha: Berlin, I-Bremen, futhi Hamburg. Izifunda zingahlukaniswa ngama-geography njengoba kubalwe ngezansi.
ENyakatho Jalimane (iBremen, Hamburg, Saxony eseMzansi, Mecklenburg-Western Pomerania, Schleswig-Holstein). Amagquma afinyelela umoya nezindawo zokuvakasha ezivamile zoLwandle Olusenyakatho kanye nolwandle iBaltic.
I-Western Germany (North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland). Izwe lewayini, amadolobha anamuhla nomlando wezimboni ezisindayo usikiwe kakhulu yiRhine Valley nesigodi saseMoselle.
ECentral Germany (Hesse, eThuringia). Inhliziyo eluhlaza yaseJalimane, enamanye amadolobha abaluleke kakhulu omlando nezimali kanye nehlathi lasendulo laseTiningian.
I-Eastern Germany (Berlin, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt). kuqokonyiswe inhlokodolobha eccentric kanye nomlando futhi kwakha kabusha Dresden mlando, "Florence on Elbe".
I-Ningizimu Jalimane (iBaden-Württemberg, eBavaria). I-Black Forest, iFrance, iSwitzerland, Isifunda saseFranconia Lake, ihlathi laseBavaria, iBavaria Alps neLake Constance.
IGermany inamadolobha amaningi anesithakazelo kubahambi; nazi eziyishumi ezidume kakhulu:
Berlin - Inhloko-dolobha yaseJalimane eyakhiwe futhi yaphinde yahlanganiswa; eyaziwa ngokwahlukana kwayo phakathi kweMpi ebandayo yiBerlin Wall. Namuhla, iyidolobha elikhulu lokwehlukahluka elinenqwaba yamakilabhu asebusuku, izitolo ezinhle, imidwebo kanye nezindawo zokudlela
I-Bremen - elinye lamadolobha abaluleke kakhulu enyakatho yeJalimane, idolobha lakhona elidala liyisiqephu sezomlando
Cologne - Idolobha elasungulwa amaRoma 2000 eminyakeni eyedlule elinesonto elikhulu, amasonto ama-Romanesque nezindawo zemivubukulo
IDortmund - eyedlule yensimbi neBeer City idume kakhulu ngebhola, isiko lezimboni, ukuyothenga kanye nemakethe enkulu kaKhisimusi eJalimane.
Dresden - eyake yabizwa ngokuthi 'yiFlorence kwi-Elbe' futhi yaziwa umhlaba wonke ngeFrauenkirche yayo futhi yakha kabusha isikhungo somlando esachithwa ngesikhathi seMpi Yezwe II
Dusseldorf - Inhloko-dolobha yaseJalimane yemfashini futhi inikezela ngezakhiwo ezintsha ezikhangayo nobusuku obumnandi obunempilo
Frankfurt - Isihlalo se-European Central Bank (ECB), enesikhumbuzo sezulu laseManhattan (“Manhattan”)
Hamburg -Idolobha lesibili ngobukhulu eJalimane lidume ngezibuko laso, isiko laso lokukhulula nokubekezelela, neRepepehn ngeziklabhu zalo zasebusuku namakhasino
Munich - Inhlokodolobha yaseBavaria kanye ne-Powerhouse Powerhouse ihlanganisa ubuchwepheshe obuphezulu nobuciko obuhle, ukuthengwa kwezinga lomhlaba, impilo ephilayo ebusuku kanye ne-Oktoberfest, futhi kuyindlela eya e-Alps
Idolobhana elidala laseNuremberg selakhiwe kabusha, kufaka phakathi iSigodlo SikaGothic Kaiserburg. Vakashela izinkundla zemibuthano yamaqembu amaNazi, isikhungo semibhalo kanye neNkantolo 600 (okuyindawo yeNuremberg Trials)
Inqaba yaseMünster (namuhla esetshenziswa yiNyuvesi)
IBaltic Sea Coast (Ostseeküste) - amamayela emabhishi anesihlabathi nezindawo zokungcebeleka ezineziqhingi ezinhle ezinjengeRügen.
IBavaria Alps (i-Bayerische Alpen) - ikhaya leNqaba eNwedwanstein Castle edume umhlaba wonke, kanye nezindawo zokuhamba ngeqhwa ezihamba phambili zaseJalimane. Ukuhamba ngezinyawo okungapheli nokuhamba ngebhayisikili. Passion Play isigodi Oberammergau.
I-Black Forest (Schwarzwald) - isifunda esinezintaba ezibanzi zezintaba, ukubukwa kwephaneli, isibhakabhaka kubavakashi nabahambi.
I-East Frisian Islands (Ostfriesische Inseln) - iziqhingi eziyishumi nambili oLwandle iWadden; I-Borkum yisiqhingi esikhulu kunazo zonke yendawo nangabantu.
IFranconia Switzerland (Fränkische Schweiz) - enye yezindawo ezindala kakhulu zokuvakasha eJalimane, yabizwa ngabadwebi abangamaRomantic abathi ukubukeka kwayo bekungobuhle obuhle babaseSwitzerland. Yize ubuhle bendawo bufana naseTranszeland, amanani entengo aphikisiwe. Ngoba i- "Fränkische Schweiz" ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu eJalimane.
IHarz - intaba ephansi eCentral Uplands yaseJalimane, edume ngemayini yesiliva yayo yomlando nasemadolobheni amahle aseQuedlinburg, Goslar naseWernigerode.
ILake Constance (Bodensee) - okuyigumbi elihle kakhulu leCentral Europe, inamageyimu ezemidlalo wamanzi namadolobhana amahle nemizana ukuze kubonwe isivakashi.
IMiddle Rhine Valley (Mittelrheintal) - ingxenye yoMfula iRhine isiza samagugu se-UNESCO phakathi kweBingen / Rüdesheim neKoblenz futhi edume ngewayini yayo.
Umgwaqo weRomantic (Romantische Straße) - indlela yetimu engaphezulu kwe-400 km ubude eningizimu yeGermany edlula ezinqabeni eziningi zomlando, phakathi kweWürzburg neFüssen. Old World Europe uyaphila futhi kahle!
IGermany inethiwekhi edume umhlaba wonke yemigwaqo emihle ne-Autobahnen (motorways) engenayo imali ekhokhwayo noma imali yezimoto (amaloli kufanele akhokhe), kodwa amanani entengo kaphethiloli agcinwa ephezulu ngentela.
Iziteshi zikaphethiloli ezise-autobahn ziyashesha futhi zilungele futhi zivame ukwemukela amakhadi okudonswa kwemali / amakhadi wesikweletu, kepha njengomthetho, uphethiloli ngokuvamile ubiza kakhulu. Akubizi kakhulu ukuthi iziteshi zimenyezelwe njenge- "Autohof" ekuphumeni kwe-Autobahn, okuyindawo engamakhilomitha noma ngaphansi ukusuka ekuphumeni futhi zivame ukuhlinzeka ngokudla okushibhile, okunezinga eliphansi kakhulu labashayeli abangochwepheshe. Ungase futhi ugcine ama-euro ambalwa ngokugcwalisa imoto yakho eziteshini zikaphethiloli ezisedolobheni elincane noma emaphandleni - vele wazi ukuthi iziteshi ezincane zikaphethiloli azivumi ukwamukela njalo imali edonswayo / amakhadi wesikweletu aphesheya, ngakho-ke gcina imali ethile isekhona!
Zonke izikhumulo zezindiza zaseJalimane zinikezela ngezinsizakalo zokuqasha izimoto futhi iningi lamafemu amakhulu okuqasha asebenza ezindaweni ezinedeski
Ukuqashwa kwezimoto kuyatholakala emadolobheni amaningi, futhi ukuqasha indlela eyodwa (ngaphakathi kweJalimane) kuvunyelwe ngokuvamile ngamaketanga amakhulu ngaphandle kwemali eyengeziwe. Lapho uqasha imoto, qaphela ukuthi izimoto eziningi eJalimane zinebhokisi lamagiya (i-stick-switch), ngakho-ke ungafuna ukucela imoto ngebhokisi le-othomathikhi uma usujwayele leyo hlobo. Abashayeli abanokuvumelanisa kokuvumelanisa kwabo kwilayisense labo elibavimbela ukushayela izimoto ezizisebenzelayo ngeke bavunyelwe ukuqasha imoto yokuhambisa.
Iningi lokuqashwa kwezimoto likwenqabela ukuthi izimoto zabo ziyiswe emazweni asempumalanga aseYurophu, kubandakanya Poland kanye neCzech Republic. Uma uhlela ukuvakashela la mazwe futhi, ungahle ukhethe ukukhetha ukuqasha imoto yakho lapho, ngoba leyo mikhawulo ayisebenzi kwenye indlela.
Ulimi olusemthethweni lwaseJalimane isiJalimane.
Onke amaJalimane afunda isiNgisi esikoleni, ngakho-ke kufanele ukwazi ukusithola nesiNgisi ezindaweni eziningi ikakhulukazi eNtshonalanga Jalimane. Abantu abaningi-ikakhulukazi embonini yezokuvakasha kanye nabantu abafundile - bakhuluma nesiFulentshi, isiRussia noma iSpanishi, kepha uma ungakwazi ukukhuluma isiJalimane, isiNgisi sihlala siyindlela yakho yokubheja. Noma ngabe ilunga elilodwa labasebenzi lingasikhulumi isiNgisi, kungenzeka uthole umuntu owenza futhi ozimisele ukukusiza.
Izindawo ezihamba phambili eziphezulu kakhulu eJalimane nokuthi yini okufanele ziyenze eJalimane
Yini ongayithenga eJalimane
Ngamaholide kazwelonke, izitolo ziyavalwa futhi ezokuhamba zomphakathi zigijimela ezingeni eliphansi. Iholide likazwelonke kungu-Okthoba 3rd, kwimemori yokuhlangana kweJalimane ngalolu suku ku-1990. Kunamaholide kaKhisimusi amabili, uDisemba i-25th kanye ne-26th. Ubusuku boKhisimusi buba yiholide ukusuka ku-2 pm noma i-4 pm, kuya ngeBundesland. Okufanayo kuya ngoNyaka Omusha, kanti uSuku loNyaka oMusha lungamaholide wonke. NgoLwesihlanu Olungile (Karfreitag), Isonto le-Easter (i-Ostersonntag) ne-Easter ngoMsombuluko (i-Ostermontag) ngamaholide omphakathi, njengoba kunjalo nangePentekosti ngeSonto (Pfingstsonntag) noWhit monday (Pfingstmontag). Amanye amaholide ancike eBundesland. Imvamisa amaholide ayahluka ngokuvuma kombuso okukhulu. Usuku lwe-Reformation Reformation Day (ngo-Okthoba 31st) luyiholide eBrandenburg, eMecklenburg-Western Pomerania, eSaxony, eSaxony-Anhalt naseTiringia, kuyilapho i-catholic All Saint's Day (Novemba 1st) iyiholide eBaden-Wuerttemberg, eBavaria, eNyakatho Rhine -Westphalia, Rhineland-Palatinate naseSaarland. Izwe elineningi lama Katolika kuthiwa linamaholide ambalwa ngaphezulu kokubhikisha okubuswa yiBundesländer.
AmaJalimane anamathela kuqoqo lamanani ahambisana nokuhleleka, ubumfihlo nokugcina isikhathi. Bayakuhlonipha futhi baphishekele ukuthanda izinto ngokuphelele kuzo zonke izici zokuphila.
AmaJalimane anedumela elingafanele lokuthi “ayabanda”, kepha empeleni lelo iqiniso. Ukuxhumana kuqondile, futhi ingxoxo ye-chit ayinakwa kakhulu ngaphandle kokuthi kunesidingo esiphelele sayo. Ngakho-ke, akujwayelekile ukuthi amaJalimane akwazi ukuxhumana nabantu angabazi. Uma usudlule isithiyo esithile, amaJalimane afudumala, amukela futhi aqotho.
Amakhofi e-Intanethi ajwayelekile futhi ajwayelekile amancane, amabhizinisi endawo. Ngeke ube nenkinga yokuthola okungenani eyodwa emadolobheni amancane noma amadolobhana amakhulu. Izitolo zezingcingo zivame ukunikela ngokufinyelela ku-inthanethi, futhi.
Amahhotela amaningi anikezela ngokufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala kwezivakashi, noma kunjalo ijubane lilinganiselwe futhi lingaba linganele ukubukwa nokusebenzisa amakhasi / izisetshenziswa ezinemithombo eminingi ye-multimedia ngokushesha. I-inthanethi ephezulu yejubane eliphezulu ingahle itholakale - imvamisa ngamanani wokukhishwa, ngakho-ke qinisekisa ukufinyelela kanye namanani ngehhotela lakho ngaphambi kokusebenzisa.
Emadolobheni amaningi, amaphrojekthi akhona ukunikela ngama-hotspots mahhala "womphakathi" wokuxhumana okungenantambo.
Imigwaqo yabagibeli kwezinye izikhungo zezindiza naseziteshini zezitimela eziphakathi nendawo inikezela ukufinyelela kwe-inthanethi kumakhasimende abo.
Imitapo yolwazi yomphakathi imvamisa ihlinzeka ngokufinyelela kwi-Intanethi, kepha imvamisa ayikhokhelwa mahhala. Imitapo yolwazi ivulekele umphakathi mahhala; ukuthatha incwadi ekhaya kungadinga ukuthi uthole ikhadi lekhasimende ngemali ephansi, noma kunjalo. Qaphela umtapo weLabhulali kaZwelonke eLeipzig, eFrankfurt am Main kuthi iBerlin ayikhokhelwa. Ukuhlola iJalimane ngokuphelele, isikhathi sempilo kungenzeka singanele ...
Indawo yokuhlala yaseWürzburg neNkantolo Yezingadi kanye neResidence Square
I-Pilgrimage Church of Wies
Izinqaba zase-Augustusburg naseFalkenlust eBrühl
ISt Mary's Cathedral neSonto likaSt Michael's eHildesheim
Izikhumbuzo ZaseRoma, ISonto LaseSt Peter neSonto leNkosazana Yethu e-Trier
IHanseatic Idolobha laseLübeck
Izigodlo namapaki ePotsdam naseBerlin
Abbey no-Altenmünster baseLorsch
Izimayini zaseRammelsberg, Idolobha eliyingqophamlando leGoslar ne-Upper Harz Water Management System
IMaulbronn Monastery Complex
I-Collegiate Church, Inqaba neDolobha Elidala laseQedlinburg
IBauhaus namaSayithi ayo eWeimar, Dessau naseBernau
Izikhumbuzo zikaLuther e-Eisleben naseWittenberg
I-museumsinsel (Museum Island), Berlin
Ingadi Kingdom of Dessau-Wörlitz
Isiqhingi saseMonastic saseReichenau
IZollverein Coal mine Industrial Complex e-Essen
Izikhungo Zomlando ZaseStralsund naseWismar
Isigodi Esiphezulu Sase-Rhine Valley
Ipaki Muskauer / Ipaki Mużakowski
ICity Hall neRoland eMakethe yaseBremen
Idolobha elidala laseRegensburg elineStadtamhof
Berlin Modernism izindlu zokuhlala
Ifektri yeFagus eAlfeld
UCarolingian Westwork noCivitas Corvey
I-Speicherstadt kanye nesiFunda saseKontorhaus ngeChilehaus
Izinkamba kanye ne-Ice Age Art eSwabian Jura
I-Archaeological Border tata yeHedeby ne-Danevirke
I-Erzgebirge / Krušnohoří Isifunda Sezimbiwa
Uhlelo Lokulawulwa Ngamanzi lwase-Augsburg